🥇 ▷ Nokia 9 PureView - Mudane 20 Pro - OnePlus 7: Isbarbardhiga Feature ✅
Nokia 9 PureView – Mudane 20 Pro – OnePlus 7: Isbarbardhiga Feature
Nokia 9 PureView iyo waaxda kamaradaha la yaabka leh ayaa kaliya ka hadalay suuqa Indian. In kasta oo aysan soo jiidan dareen badan, tani waa mid ka mid ah taleefannada ugu cajiibka badan ee sanadka 2019, oo tanina waa qalabkii ugu horreeyay ee lagu dhiso kaameeraha Penta ee galka dambe. In kasta oo ay ahayd taleefanka ugufiican ee sawir qaadayaasha xiiseeya, haddana waa calan la awoodi karo, oo la siiyay in laga doodo Jasiiradda ballaaran ee Hindiya, waxaan u maleyneynaa in la joogo waqtigii la isbarbardhigi lahaa calanka kale ee tartamaya ee 2019. Waxaan dooranay Sharafta 20 Pro iyo OnePlus 7 sababtuna tahay awoodooda kamarado ee aadka u fiican iyo qiimaha qiimaha oo la awoodi karo marka la barbar dhigo calanka kale.
Nokia 9 PureView vs Huawei Honor 20 Pro vs OnePlus 7
FARSAMADA IYO CODKA 155 x 75 x 8 mm, 172 g 154.6 x 74 x 8.4 mm, 182 g 15.7.7 x 74.8 x 8.2 mm, 182 g
Muuji 5.99 inji, 1440 x 2880 pixels (Quad HD +), P-OLED 6.26 inji, 1080 x 2340p (Full HD +), IPS LCD 6.41 inji, 1080 x 2340p (HD oo buuxa), optical AMOLED
processor Qualcomm Snapdragon 845, 2.8 GHz octa-core processor Huawei HiSilicon Kirin 980, octa-core oo leh celcelis dhan 2.6 GHz Qualcomm Snapdragon 855 octa-core 2.8 GHz processor
XIGASHO 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 6 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 256 GB
SOFTWARE Android 9 Pie, Android One Android 9 Pie, EMUI Android 9 Pie, Oxygen OS
XIRFADAHA Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.0, GPS Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.0, GPS Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.0, GPS
CAMERAS Penta 5 × 12 MP, f / 1.8
20 megapixel camera Quad 48 + 16 + 8 + 2 MP, f / 1.4, f / 2.2, f / 2.4 iyo f / 2.4
32MP f / 2.0 kamarad hore Labaal 48 + 5 MP, f / 1.7 iyo f / 2.4
16 megapixel f / 2.0 kamarad hore
DHAQANKA 3320 mAh, 18 W oo deg deg ah oo ay kujirto Degdega Degdega ah ee Degdega ah ee 3.0, USB-PD, Qi 10 W ku dallaca deg deg ah 4000 mAh, si dhakhso ah 22.5 W 3700 mAh, si dhakhso ah 20 W
SIDOO KOOBAN FARSAMADA Laba duub oo SIM ah, IP67, biyuhu ma difaacaan Laba duub oo SIM ah Laba duub oo SIM ah
In kasta oo tayada la taaban karo ee dhismaha la dhisayo, Nokia 9 PureView ma diiradda saarto naqshadeynta iyo muuqaalka. Waxay leedahay dabool dhabarka aad u qurux badan, laakiin waxaa ku yaal godad aad u tiro badan, iyo sidoo kale xirmooyin qaro weyn oo hareeraha ka muuqda. OnePlus 7 ayaa uun cusboonaysiin yar u ah OnePlus 6T, waxayna u dhowdahay inay ku siman tahay suuxinta, mana jiraan wax xiiso leh oo ku saabsan arrintaas. Runtii xiisaha lihi waa Honor 20 Pro, kaas oo leh soosaarid muuqaallo leh iyo darbooyin hore oo aad u dhuuban. Xitaa waa midka ugu is haysta, sidaa daraadeed waxay si fiican ugu habboon tahay jeebkaaga waana fududahay in lagu isticmaalo hal gacan. Laakiin ogsoonow in Nokia 9 PureView uu yahay taleefanka keliya ee biyuhu biyuhu uusan ku xirneyn oo ay ugu wacan tahay caddeynteeda IP67 (ma ahan heerka ugu sarreeya ee iska-caabbinta biyaha, laakiin waxay u adkeysan kartaa dhex-gelitaanka ku-meel-gaarka ah illaa qoto dheer 1 mitir muddo 30 daqiiqo ah).
In kasta oo Nokia 9 PureView aysan lahayn qaabeynta ugufiican, hadana runti waxay la timid soo bandhig wanaagsan. In kasta oo ay ka kooban tahay qaab 18: 9 ah, waxay ku faantaa qaraar ka sarreeya kuwa la tartamaya (Quad HD + oo leh qaraar ah 1440 x 2880 pixels), oo xitaa la jaan qaadi kara HDR10, sidaa darteed waxay leedahay soo-saar midab oo cajiib ah. Hadda waa inaad go’aan ka gaartaa haddii aad iibsanayso xirmooyin qaro weyn oo muuqaal ka wanaagsan iyo in kale. Biladda qalinku waxay aadeysaa OnePlus 7, oo wali ku qalabeysan soo bandhigida OLED, sida Nokia 9 PureView, laakiin leh qaraar hoose isla markaana aan la jaan qaadi karin HDR. Honor 20 Pro waxay leedahay gole dhexe oo IPS ah, kaasoo ah meesha ugu liidata marka la barbar dhigo calanka kale.
OnePlus 7 wuxuu si habsami leh u shaqeeyaa qalabka sababtoo ah wuxuu leeyahay processor awood badan leh. Waxaan ka hadlaynaa ‘Qualcomm’s Snapdragon 855’, oo ku shaqeynaya 2.84 GHz sare oo soo noqnoqda oo aan ku daraynno processor-ka sawir wanaagsan. Isla markiiba waxa jira Honor 20 Pro, oo ku qalabeysan Kirin 980 RAM iyo 8 GB, meesha ugu dambaysana waxaa leh Nokia 9 PureView iyo jiilkeedii hore Snapdragon 845 chipset oo ay weheliso 6 GB oo RAM ah. Laakiin Nokia 9 PureView wali waa mid aad u dhakhso badan oo si joogto ah loo cusbooneysiiyay, maadaama ay qayb ka tahay barnaamijka Android One.
Waxa aan ugu jeclahay markay tahay kaamirooyinka waa Nokia 9 PureView, maadaama kamaradiisa Penta ka kooban yahay 2 RGB dareemayaal iyo 3 dareemayaal monochromatic. Dhammaan dareemayaasha ayaa si isku mid ah u shaqeyn kara, waxayna soo ururiyaan qaddar aad u fiican oo iftiin iyo macluumaad qoto dheer oo faahfaahsan. Thanks to qalabkan, waxaad qaadi kartaa sawirro xirfadle ah oo aad wax uga beddeli karto hab horumarsan. Haddii aan kahadalno tayada sawirada, Sharafta 20 Pro waa ka sii badan tahay ama ka yar tahay isla heerkeeda oo leh 48 megapixel, waa isha ugu iftiinka badan ee weligeed lagu arkaa taleefanka gacantu (f / 1.4), oo lagu iftiimiyay kamarado macro iyo xitaa camera ugu fiican ee selfie marka loo eego Nokia 9 PureView.
Marka loo eego inay leedahay batteriga si weyn uga weyn OnePlus 7 iyo Nokia 9 PureView, iyo sidoo kale bandhig yar, Honor 20 Pro wuxuu ku guuleystaa isbarbardhiga nolosha batteriga. Isla markiiba ka dib, OnePlus 7 ayaa soo muuqday, oo Nokia 9 PureView waxay leedahay batari celcelis ahaan laga qaado.
Iyadoo Nokia 9 PureView iyo Honor 20 Pro ay leeyihiin qiimo bilow ah oo ah 600 Euro / 675 doolarka Mareykanka ah (waxay ku kala duwan yihiin hadba suuqa), qiimaha OnePlus 7 wuxuu ka bilowdaa 550 Euro / 620 doolarka Mareykanka. Haddii ay ahayd inaan doorto aaladda ugu fiican macaamiisha badankood, waxaan dooran lahaa Sharafta 20 Pro sababta oo ah naqshadeynteeda ka fiican, batteriga weyn iyo kamaradaha cajiibka ah.
Warar dheeraad ah ka sii aqri: ASUS Zenfone 6 wuxuu la imanayaa kamarad flip, 5000 mAh batari iyo SD855 oo ah € 499
Nokia 9 PureView vs Huawei Honor 20 Pro vs OnePlus 7: barwaaqo iyo khasaare
Kaamirada ‘Penta Camera’
Biyo u adkaysta
Kicinta bilaa wireless
Bateriga ugu weyn
Ku hadla stereo
Tayo wanaagsan oo tayo leh